Zisazoqhubeka izinhlelo zeComrades Marathon
U-EDWARD Mothibi waseMahikeng uyena owawina iComrades Marathon ka-2019 ebibheke eMgungundlovu Isithombe: FACEBOOK
LUNGILE MAJOKA | March 18, 2020
ABAHLELI beComrades Marathon bathi zisaqhubeka izinhlelo zomjaho walo nyaka yize imiqhudelwano eminingi sekuphoqeleke ukuthi ihoxiswe noma imiswe ngenxa yokwanda kweCoronavirus.
Ngempelasonto abagijimi basale bezibuza ukuthi ngabe izoba khona yini iComrades Marathon yalo nyaka emuva kokuhoxiswa kweTwo Oceans Marathon.
I-Two Oceans imiswe ngabagqugquzeli bayo ngoba bebhekelela ukuphepha kwabagijimi.
IComrades Marathon kumele ibe ngoJuni 14 isuka eMgungundlovu iyophela eThekwini, KwaZulu-Natal.
Ngempelasonto uMengameli Cyril Ramaphosa uchaze ubhubhane njengenhlekelele ehaqe isizwe wamemezela ukuthi ukulunqanda kungabi khona lapho kuhlangana khona abantu abangaphezu kuka-100 endaweni eyodwa.
IComrades, omunye wemijaho emikhulukazi emhlabeni, ingenelwa yizinkulungwane zabagijimi abaqhamuka emhlabeni wonke.
URamaphosa ubuye wamemezela ukumiswa kokuvunyelwa ukuza eNingizimu kwabaqhamuka eSpain, USA, United Kingdom, China, Italy, Germany, Iran naseSouth Korea.
Amalungu ebhodi yeComrades Marathon ahlanganile ngoMsombuluko avumelana ngokuthi azosiqapha isimo.
Isitatimende esithunyelwe yiCMA izolo sithe isimo sizosibhekwa bese kuthathwa isinqumo esiwujuqu ngo-Ephreli 17.
“Ngokulandela imibandela ebekwe uhulumeni, I-ASA (Athletics South Africa) neKwaZulu-Natal Athletics, ibhodi yeCMA izobuyekeza isimo ngo-Ephreli 17, bese yazisa abagijimi nabathintekayo ngenqubekela phambili. Kuzoya ngokuthi ngabe igciwane limi kanjani ezweni ngaleso sikhathi,” kusho isitatimende seCMA.
Usihlalo weComrades Marathon Association (CMA), uCherly Winn, uthe babone ukuthi kuwukuthatha ngewala ukuhlehlisa umjaho.
“Njengoba kusenezinyanga ezintathu ngaphambi kwe-#Comrades2020, ibhodi yeCMA inqume ukuthi kuseva ukuthi kumiswe iComrades Marathon. Sizoqhubeka nokusibheka isimo nsuku zonke bese sithatha isinqumo ngo-Ephreli 17 esizocacisa ukuthi iComrades ka-2020 iyamiswa noma ibekwa kolunye usuku kulo nyaka,” kusho uWinn.
Uthe okwamanje banxusa abagijimi ukuthi baqhubeke nezinhlelo zabo zokucijela lo mjaho okuzobe kungoka-95 kulo nyaka.
- Ezemidlalo esezimisiwe kuleli ngenxa yeCoronavirus
-IPremier Soccer League imise imidlalo ye-Absa Premiership yaleli sonto neyangempelasonto. Kusasa kuzoba nomhlangano okulindeleke ukuthi ukhiphe isinqumo esiwujuqu kuwona.
- I-Athletics South Africa imise yonke imidlalo kusukekela kweyezikole izinsuku eziwu-30 kusukela ngoMsombuluko.
- ICricket South Africa inqamule konke ukudlalwa kwekhilikithi kuwona wonke amazinga. Lokhu kuzokwenzeka izinsuku eziwu-60.
- ISouth African Football Association nayo imise imidlalo yayo.
- INetball South Africa imise izinhlelo zemidlalo ebizoba ngoMashi no-Ephreli okukhona iTelkom Netball League nekhempu yeqembu lesizwe lika-Under 21.
- Ihlehlisiwe imidlalo yeCosafa Women’s Under 17 Championship obekumele ibe ngo-Ephreli 17-26 eMauritius. Lokhu kwenzeke ngemuva kokuthi uhulumeni uthe uzovala imingcele ukuzama ukunqanda ukwanda kweCoronavirus.
- IBoxing South Africa imise zonke izimpi ebezizoba ngoMashi no-Ephreli.